SP 35 /Fitokanana Zava-bita – FJKM
Nitokana zava-bita teny Fihaonana
SP Vonizongo Vavolombelona ny FJKM
Miroso hatrany amin’ny asa isika. Taorian’ny fivoriana izay nataon’ny Mpiandraikitra foibe dia niroso tamin’ny iftokanana ny zava-bita tany Fihaonana Vonizongo ny teo anivon’ny Foibe FJKM ny Zoma 20 Novambra 2020 lasa teo. Fotodrafitrasa efatra(4) lehibe no notokanana tamin’izany.
Voalohany, ny Sekoly Teknika izay eo ambany fiahian’ny Foibe Fitondran-tsekoly FJKM. Ny sekoly dia efitrano lehibe misy rihana iray ary ahitana efitra 9. Mitsinjara ho efitrano fianarana sy Trano famakiam-boky,
Trano fanaovana infôrmatika ary trano fandriana ho an’ny Kilasimandry . Ny sampam-piofanana mahakasika ny fambolena sy fiompiana no atao ao. Fotom-piveloman’ny mponina any an-toerana ny fambolena sy fiompiana ka ho fampandrosoana sy fanatsarana izany indrindra no anton’ny fananganana ity sekoly ity. Afaka misitraka ny fianarana sy fiofanana ihany koa anefa na dia ny avy lavitra noho izy manana toerana handraisana mpianatra kilasy mandry.
Ny faharoa, kianja filalaovam-baolina izay mbola tany mena ihany hatreto. Noheverina hanatanterahana ny fanadinana fanatanjahantena ara-panjakana izy io. Malalaka sy manana ny refy ilaina amin’izany ny kianja.
Ny fahatelo, ny fanatsarana ny tobim-pitsaboana izay mbola fananan’ny fiangonana. Ny trano no an’ny fiangonana fa ny olona rehetra tsy ankanavaka no andrasana hanatona hitsabo tena ao. Fitsaboana feno no afaka sitrahana ao ary misy toerana fampiterahana arifomba sy ampy fitaovana tsara. Ahitana efitra fampiterahana sy fitaovana mifanaraka aminy tsara.
Ny fahaefatra farany, ho fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana lovainjafy dia misy ihany koa ny tanin-janakazo, izay ahitana karazana hazo sy voninkazo. Eo amin’ny vavahady fidirana dia efa ahitana ny karazana zanakazo izay miisa 75 raha kely indrindra. Ahitana toerana fanaovana grefy ihany koa.
Nambaran’ny Ben’ny tanàna ao an-toerana, fa tombontsoa lehibe ho an’ny mponina no manana izao Fotodrafitrasa izao noho izy tena mahakasika ny filan’ny Mponina manontolo. Ezahana ny hikajy sy hikolokolo ny toerana raha ny nambarany hatrany ary namaranany azy dia ny fankasitrahana ny eo anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy Eto Madagasikara.